လက်ကား Flat Glass Sliver Spray ဗလာရေမွှေးပုလင်း 54ml 114ml ထုတ်လုပ်သည်။
【Package Includes】 : အကြည်ရေမွှေးပုလင်း၊ လိုအပ်ပါက ရေမွှေးဖြည့်ရန် ပလပ်စတစ်အပေါက် ၃ ခု ထပ်ထည့်ပါမည်။
【စွမ်းရည်】- ရေမွှေးပုလင်းကို စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါသည်။ခရီးတို ခရီးတို၊ ရုံးသွား၊ ဈေးဝယ်ထွက်၊ အလည်အပတ် နှင့် အခြား အချိန်အခါများတွင် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အရွယ်အစား။
【 FINE MIST PERFUME BOTTLE】- ထူထဲသောဖန်သား၊ ကြည်လင်ပြီး တာရှည်ခံပါသည်။ရေမွှေးအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော အမှုန်အမွှားများကို သန့်စင်ပေးသည့် သတ္တုမှုန်ရေဖျန်းမှုနှင့်အတူ၊
【VERSATILE USE】: ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးမြင့် ရေမွှေးပုလင်းကို ခန္ဓာကိုယ်ဖြန်းဆေး၊ DIY အိမ်လုပ်ဖြန်းဆေး၊ သဘာဝရေမွှေး၊ လေသန့်စင်စက်၊ ရေမွှေးနမူနာ၊ ရေမွှေးစုဆောင်းမှု အစရှိသည်တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
【IDEAL GIFT】- သင့်သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် မိသားစုအား ပေးဆောင်ရန် ခမ်းနားသောလက်ဆောင်ကို သင်ရှာဖွေနေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုင်ကျသော ဖန်ခွက်ရေမွှေးပုလင်းတွင် အထူးကောင်းမွန်သော သန့်စင်စက်၊ ကြည်လင်သောကိုယ်ထည်၊ ထူထဲသောအောက်ခြေနှင့် ချစ်စရာဦးထုပ်ပါရှိပါသည်။သင့်မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများသည် ဤရေမွှေးပုလင်းကို နှစ်သက်ကြပါလိမ့်မည်။ ခရစ္စမတ်၊ ကျေးဇူးတော်နေ့၊ နှစ်သစ်ကူး၊ မွေးနေ့၊ ပါတီ၊ အဖေများနေ့၊ အမေများနေ့ လက်ဆောင်များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
32ml 53ml 102ml လက်ကားတန်ဖိုးကြီးထုပ်ပိုးမှုကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ ဗလာကျင်းထားသော Spray Glass Perfume Bottle၊
【Package တွင်ပါဝင်သည်】- ကြည်လင်သောရေမွှေးပုလင်း atomizer ၊ လိုအပ်ပါက၊ ရေမွှေးဖြည့်ရန် ပလပ်စတစ်အပေါက်3ခု ထပ်ထည့်ပါမည်။
【စွမ်းရည်】- ရေမွှေးပုလင်းအလွတ်များကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ခရီးတို ခရီးတို၊ ရုံးသွား၊ ဈေးဝယ်ထွက်၊ အလည်အပတ် နှင့် အခြား အချိန်အခါများတွင် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အရွယ်အစား။
30ml 50ml စတုရန်းပယင်းစံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီဖန်ခွက်ဖြန်းအနက်ရောင်ရေမွှေးပုလင်း
【Package တွင်ပါဝင်သည်】- အကြည်ရေမွှေးပုလင်း atomizer ပုလင်း၊ လိုအပ်ပါက ရေမွှေးဖြည့်ရန် ပလပ်စတစ်အပေါက်3ခု ထပ်ထည့်ပါမည်။
Square Cosmetic Spray Perfume Bottles Matte Luxury 30ml 54ml 110ml ရေမွှေးပုလင်း
【Package တွင်ပါဝင်သည်】- ကြည်လင်သောရေမွှေးပုလင်း atomizer၊ လိုအပ်ပါက၊ ရေမွှေးဖြည့်ရန် ပလပ်စတစ်အပေါက် ၃ ခုထည့်ပါမည်။
30ml 54ml 110ml လက်ကားတန်ဖိုးကြီးထုပ်ပိုးမှုကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ ဗလာကျင်းထားသော Spray Glass Perfume Bottle
Luxury Round bottle PUMP SPRAYER Cylinder Glass Empty Perfume Bottles 53ml 101ml
【စွမ်းရည်】- စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါသည်။ခရီးတို ခရီးတို၊ ရုံးသွား၊ ဈေးဝယ်ထွက်၊ အလည်အပတ် နှင့် အခြား အချိန်အခါများတွင် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အရွယ်အစား။
အခမဲ့နမူနာ 30ml 50ml Spray အားပြန်ဖြည့်နိုင်သော စိတ်ကြိုက်ရေမွှေးပုလင်း လက်ကား
【Package များ ပါဝင်သည်】: လိုအပ်ပါက ရေမွှေးဖြည့်ရန် ပလပ်စတစ်အပေါက် ၃ ခု ထည့်ပေးပါမည်။
【စွမ်းရည်】: ရေမွှေးပုလင်း စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါသည်။ခရီးတို ခရီးတို၊ ရုံးသွား၊ ဈေးဝယ်ထွက်၊ အလည်အပတ် နှင့် အခြား အချိန်အခါများတွင် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အရွယ်အစား။
【အမိုက်စား ရေမွှေးပုလင်း】: ထူထဲသော ဖန်ပစ္စည်း၊ ကြည်လင်ပြီး တာရှည်ခံသည်။ရေမွှေးအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော အမှုန်အမွှားများကို သန့်စင်ပေးသည့် သတ္တုမှုန်ရေဖျန်းမှုနှင့်အတူ၊
【စွယ်စုံအသုံးပြုမှု】: ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးမြင့် ရေမွှေးပုလင်းကို ခန္ဓာကိုယ်ဖြန်းဆေး၊ DIY အိမ်လုပ်ဖြန်းဆေး၊ သဘာဝရေမွှေး၊ လေသန့်စင်စက်၊ ရေမွှေးနမူနာ၊ ရေမွှေးစုဆောင်းမှု အစရှိသည်တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
【စံပြလက်ဆောင်】: သင့်သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် မိသားစုကို ပေးဆောင်ရန် ခမ်းနားသောလက်ဆောင်ကို သင်ရှာနေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုင်ကျသော ဖန်ခွက်ရေမွှေးပုလင်းတွင် အထူးကောင်းမွန်သော သန့်စင်စက်၊ ကြည်လင်သောကိုယ်ထည်၊ ထူထဲသောအောက်ခြေနှင့် ချစ်စရာဦးထုပ်ပါရှိပါသည်။သင့်မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများသည် ဤရေမွှေးပုလင်းကို နှစ်သက်ကြပါလိမ့်မည်။ ခရစ္စမတ်၊ ကျေးဇူးတော်နေ့၊ နှစ်သစ်ကူး၊ မွေးနေ့၊ ပါတီ၊ အဖေများနေ့၊ အမေများနေ့ လက်ဆောင်များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
42ml 100ml 215ml Feel Frosted Glass Refillable Diffuser ပုလင်း၊ ငွေရောင်ထုပ်များ
1. အဆင့်မြင့် ရနံ့ကုထုံးပုလင်း၊ ကျူပြူဆာပုလင်း၊ ကြော့ရှင်းပြီး စွယ်စုံရ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသည်။
2. ရိုးရှင်းသောစတိုင်၊ အိမ်၊ ကား diffuser ပုလင်းများကိုအလှဆင်ပါ။ရနံ့ကုထုံးဖြင့် အနံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
3. OEM ဝန်ဆောင်မှုကို အမြဲရရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပုလင်းများကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန် သုံးစွဲသူများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပေးပါသည်။
4. ပုလင်းများ၏ ပမာဏမှာ 30ML- 1000ML မှဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် ရွေးချယ်စရာများ ပိုများသည်။
5. ဦးထုပ်/ ကြိမ်ချောင်း/ ဖိုက်ဘာချောင်း ကဲ့သို့သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုလည်း ရရှိနိုင်သည်။
6. ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဖြင့် Diffuser ဖန်ပုလင်း 200 နီးပါးရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် E-catalog မှ ပုလင်းများကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
Reed diffuser ပုလင်း, Glass Bbq Sauce ပုလင်းများ, ဖျော်ရည်အတွက် ဖန်အိုး, ဖန်ပုလင်းအချိုရည်, ဘီယာ ဖန်ပုလင်း, ဖန်ရည်ပုလင်းများ,